Home News Xildhibaanad Foowsiya oo ah Gudoomiyaha Xisbigga N.D.P oo Xoog-ku qaadaneeyso...
Xildhibaanad Foowsiya oo ah Gudoomiyaha Xisbigga N.D.P oo Xoog-ku qaadaneeyso Guri uu lahaa Wasiir Hore Ismaaciil Jimcaale Cosoble (VIDEO+CADEEYN)
Wasiirkii Hore Ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya Hadana ah Xubin ka Tirsan Baarlamaanka Soomaaliya Foowsiya Xaaji Aadan ayaa lagusoo waramayaa in ay Dhac iyo Boob Bareer ah kula Kacday Guri uu lahaa Wasiir oo caan ah,kaasi oo lagu Magacaabi jiray AUN Dr. Ismaaciil Jimcaale Cosoble.
Ehelka Marxuumka oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in ay mar qura la kulmeen Foowsiya Xaaji Aadan iyo Ciidan xoogan oo la socday kuwaasi oo durba ku dhaqaaqay in ay Ducument’syo Goob yiil ay kala Tuur-tuuraan,markii ay weeydiiyeen sida ay wax u jiraan waxaa ay u sheegtay in ay Sabarloogii guriga ay wadato.
Xildhibaanad Foowsiya Xaaji Aadan ayaa waxaa ay sheegtay in uu soo amray Taliye Ciidan waxaana ay Gacanta ku Heeystay Markii ay Guriga tegeeysa Warqad”A4” ah taasi oo ay ku sheegtay in ay tahay Document-gii Guriga,Alaabkii Qooyska iyo Warqadahii kale Ee Marxuumka ayeeyna si bareer ah Qashinka ugu dartay sida aan xogta ku heleeyno.
Shaqsi goobta joogay oo ehel la ah Marxuum AUN Dr. Ismaaciil Jimcaale Cosoble! ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku wargeliyeen Maamulka Degmada Shangaani ka dibna uu goobta soo gaaray,waxaana uu gudoomiyahu Xildhibaanada ku wargeliyay in ay qaldan tahay oo ayna soo marin Maamulka Degmada.
AUN Dr. Ismaaciil Jimcaale Cosoble ayaa waxaa uu xilal kala duwan kasoo qabtay Dowladahii Rayidka ahaa,waxaana uu caan ku yahay gurigiisa ay hada damacsan tahay in ay boobto Xildhibaand Foowsiya.
Xildhibaanad Foowsiya Xaaji Aadan waxaa ay Gudoomiye ka tahay Xisbi lagu Magacaabo National Democratic Party (NDP),kaasi oo aan hadda ka mid aheeyn Xisbiyadda muuqda Hase’yeeshee ay rabto in ay boorka ka Jafto,waxaana lagusoo waramayaa in ay gurigaaso rabto in ay dajiso Xisbigga oo Hadda Guri Kiro ah ka Deggan Magaalada Muqdisho Gaar ahaan isgooyska KM4,Hotel Giyaajo.
Waxaa ceeb ah in Xildhibaanada Qaranka Kuwooda isha-Bulshada ah in ay usoo jeestaan dhaca iyo boobka Umadda Soomaaliyeed Dowlada waxaa laga rabaa in ay Arinkaan Ka hadlaan oo ayna ka Aamusin.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay in Duqeeyn laga Fuliyay Soomaaliya Lagu Dilay 70-Dagaalame oo ka Tirsan Al-shabaab
Next articleXildhibaanada saxiixay mooshinka Madaxweyne Farmaajo oo kor u dhaafay 110 (Akhriso)
Dowlada oo ka hadashay dilal kala duwan oo Muqdisho ka dhacay!!
RW Kheyre sidee buu uga jawaabay hadalkii xanafta lahaa ee Wasiir...